Global Voices teny Malagasy » Thailand: Korontana ho an’ny Praiminisitra ny hafatra an-tsoratra amin’ny finday · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Jolay 2010 17:49 GMT 1	 · Mpanoratra Arthit Suriyawongkul Nandika zhhantar
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Politika, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna
Tamin'ny 18 Desambra 2008, an-tapitrisany amin'ireo finday Thai mpanjifa mpikambana no nahazo ny hafatra an-tsoratra avy amin'ny Praiministra vaovao vao nipetraka Abhisit Vejjajiva:
“Manasa anao ny tenako, izaho, Praiministra vaovao, ny hanafahanao an'i Thailand amin'ny krizy. Raha mahaliana anao ny hifandray amiko, dia mba alefaso amin'ny tarehimarika 9191(3 Baht) ny isamiafina 5 fanalahidin'ny findainao”
Raha mamaly ny mpanjifa iray dia misy raki-peon'ny Praiminisitra Abhisit halefa any amin'ny findain'ilay mpanjija, izay milaza hoe :
“Izaho, Abhisit Vejjajiva, Praiministra, dia mahalala fa mijaly ianareo mponina namana, ary ao anatin'ny tebitebin-tsaina. Na izany aza, hafantoko amin'ny fanampiana ny firenena ireo fahaizako sy ny fahafaha-manaoko rehetra eo am-perin'asa. Saingy tsy ho tanterako kosa izany raha tsy mifankahazo am-po daholo ny vahoaka Thai rehetra. Ka iangaviako ianareo rehetra ny hanome anjara iray ho ahy.”
simaiso avy amin'ny PM
Raha ny hevitry ny mpiasa ao amin'ny Antoko Demokraty, hevitr'i Abhisit manokana ny fandefasana hafatra amin'ny finday,  ary nokarakarain'i Korn Chatikavanij, Ministry ny fitantanam-bola any amin'ny firenena. Voalaza fa nantsoin'i Korn ireo mpandraharaha ara-pifandraisan-davitra telo lehibe any Thailand: AIS, DTAC, sy i True, mba hiara-miasa amin'ny fandefasana ny hafatra amin'ireo mpanjifan-dry zareo. Natao tamin'ny 16 Desambra ny fihaonana ho an'ny fiaraha-miasa, iray andro mialohan'ny nanambaràna ofisialy an'i Abhisit Vejjajiva ho Praiministra. Ary ny antony nangatahana ireo isa 5 fanalahidin'ny finday dia ny mba hahafahana maminavina ireo tahan'isan'ireo izay namaly. Halahatra anaty tahirin'isa arak'izany ireo mpanjifa namaly.
Azo lazaina ho fandikana ireo zo manokan'ny mpanjifa ny fandefasana hafatra ho an'ilay olona raha tsy nanaiky izy, hoy ny mpisolo vava miaro ny zon'ny mpanjifa iray Saree Ongsomwang.  Niteny izy fa tokony nisafidy ny hifandray amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ireo toeram-pivarotana hafa momba ny fifandraisana amin'ny vahoaka i Abhisit mba hialana ny fanitsahana ireo zon'ny mpanjifa. 
Nanampy ihany koa i Saree, izay anisan'ny mpikambana ao amin'ny komitin'ny Telecommunication Consumer Protection Institute, fa tsy manana alalana ny hanome ny lisitr'ireo mpanjifa tsy nanome ny alalany ireo mpandraharaha aram-pifandraisan-davitra, araka ny lalànan'ny fifandraisan-davitra Thai. Nitondra fahasarotana ara-politika sy araka ny lalàna izany raha nandefa ity hafatra an-tsoratra manahirana ity ho an'ny mpanjifany, maimaim-poana, ary avy amin'ny Praiministra na ny Antoko Demokraty, ireo mpandraharaha ara-mpifandraisan-davitra telo.
Eo ambanin'ny Lalàna iadiana amin'ny kolikoly tamin'ny taona 1999  (novaina tamin'ny 2007), tsy mahazo mandray fanomezana na tombon-tsoa mihoatry ny 3,000 Baht  ireo mpiasam-panjakana; anisan'izany ireo mpikambana amin'ny mpanolo-tsaim-panjakàna. Heverina anefa fa mitentina mihoatra ny 10 tapitrisa Baht ny fandefasana ny hafatra an-tsoratry ny Praiministra. Mety ho helohina eny amin'ny fitsarana i Abhisit raha ny hevitr'i Pheu mpitondra tenin'ny Antoko Thai Prompong Nopparit, izay mampirisika ny Komisiona Nasionaly miady amin'ny Kolikoly (NACC) mba hanadihady momba io tranga io. 
Raha hita fa meloka i Abhisit sy Korn, ho voasakana sy haato amin'ny fitazonana toerana ara-politika i Abhisit sy i Korn, araka ny mifanaraka amin'ny Lalam-panorenana.
Somary mifangaro ihany ireo tsikera ao amin'ny aterineto tamin'izany fotoana izany. Amin'ny ankapobeny, maro ireo manaiky fa mety ho fandikàna ny zo miaro ny fiainan'ny tena manokana sy ny zavatra rehetra mikasika ny tena izany, ary diso mampiasa fifandraisam-bahoaka loatra amin'ny haino aman-jery ny Praiministra. Eo andanin'izany ihany anefa, mahatsapa izy ireo fa tokony hilamina izany raha eritreritra tsara no nitondrany azy, ary tokony hanana anjara ny hiasa ho an'ny tanindrazana izy .
Fanehoan-kevitra vitsivitsy avy amin'ny Yahoo! Answers :
Non noN: “Mieritreritra aho fa fitsikilovana ny fiainam-bahoaka mihitsy izany, noho izy mangataka ny isamiafin'ny finday. Ka ho fantany arak'izany hoe distrika aiza, faritany aiza no namaly, ary ahafahan'izy ireo maminavina ny zava-misy. Raha amiko manokana dia tsara izany ary te-hahita ny filaminana aho manerana ny faritr'i Thailand rehetra .”
Nicky: “Iza no nahazo ny 3 baht? Afaka tsy misafidy izany ve izaho ? Efa kely sisa dia ho feno ny vata fitahirizan-kafatry ny findaiko. Karazana finday efa antitra .”
‘A-Mei': “Mieritreritra aho fa tetika ara-barotra daholo izany .”
Tanapon: “Eny, betsaka loatra izany. Fa tokony omentsika anjara iray izy , hanaporofoiny ny tenany amin'ny alalan'ny asany. Tsara kokoa izay noho ny hoe hiady isika .”
NH: “Mihevitra aho fa tokony ho tsara ny vokatra raha eritreritra tsara no nanaovana izany.”
Tamin'ny 16 Jolay 2010, nahemotry ny NACC indray ny fanapahan-keviny amin'ity tranga ity,  ary mbola tsy nanome daty ihany izy ireo amin'ny hanomezany ny fanapahan-kevitra farany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/22/7438/
 izay milaza hoe: http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081217221358AANnYBd
 hoy ny mpisolo vava miaro ny zon'ny mpanjifa iray Saree Ongsomwang.: http://news.sanook.com/politic/politic_330795.php
 mba hialana ny fanitsahana ireo zon'ny mpanjifa.: http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?newsid=30091357
 Lalàna iadiana amin'ny kolikoly tamin'ny taona 1999 : http://bit.ly/a0gP90
 tsy mahazo mandray fanomezana na tombon-tsoa mihoatry ny 3,000 Baht: http://bit.ly/c4fTK6
 izay mampirisika ny Komisiona Nasionaly miady amin'ny Kolikoly (NACC) mba hanadihady momba io tranga io.: http://tnews.teenee.com/politic/45297.html
 nahemotry ny NACC indray ny fanapahan-keviny amin'ity tranga ity,: http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/79107.html